သင် ကားဝယ်တော့မယ်ဆို ဒါလေးအရင် ဖတ်ကြည့်ပါ - Barnyar Barnyar
April 29, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
မျက်မြင် ကား သွားဝယ်မယ့် အမျိုးတွေ အတွေးမမှား ဈေးမများစေဖို့ ဒါလေးဆောင်ထား အကြမ်းအားဖြင့် တော့ မမှားနိုင်တော့ပါ
၁။ ကား ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရရှိပြီးအရိပ်အောက်သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်နိုင်သောနေရာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးနေ့လည့်ခင်း နေပူအောက်ကြည့်ရှု့ခြင်းရှောင်ပါအပူဒါဏ် ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်ကားကြည့်ရှုသောအခါတွင်သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်လို့စစ်ရမှာတွေကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ အပူဒါဏ်သက်သာအောင်ဆိုပြီးညနေဘက်နဲ့မိုးချူပ်ပိုင်းတော့ ကား ကြည့်ဖို့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်သဘောပေါက်ပါရေထဲ ပိုက်ဆံလွင့်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်အသံမြည်ဦးမှာပါ..
၂။ ကား ကိုတွေ့တာနဲ့ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါခါးပါတ်ခေါင်းတွေမှာထုတ်တဲ့ ခုနှစ်တွေ အတိအကျရေးထားပါတယ်ဖြဲထားတာမျိုး ၊ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ထားတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူး ကြည့်တာနဲ့တွေ့ရပါမယ်ကားပိုင်ရှင် ပါးစပ်ကဘယ်နှခုနှစ်ပါလို့ အမြုတ်ထွက်အောင်ပြောနေလဲကျွန်တော် တို့မျက်စိရယ် ဦးနှောက်ရယ်နဲ့ဘဲအလုပ်လုပ် ကြရမှာဖြစ်လို့ ကျန်တာတွေ ခဏ မေ့လိုက်ပါ
၃။ ကား ကိုစက်နှိုး ပါ ပြီးတာနဲ့အဲကွန်းဖွင့်လိုက်ပါ စက်သံသည်ဆူညံ ကျယ်လောင် တာမျိုးကိုတော့ ခွဲတတ်ပါစေပြီးလျှင်အဲကွန်းလေအေးမအေး စစ်ပါ
၄။ ကားအစီးတိုင်းမှာ Wheel Tax ပါပါတယ်ပါတဲ့ Wheel Tax ဖရိန်နံပါတ်နဲ့ကားမှာ တကယ်ပါသောနံပါတ်တူညီမှု ရှိမရှိ အရင်စစ်ပါ၊ကားမှာတပ်ထားသော ဖရိန် chassis နေရာသည်လည်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေရပါမည် ဖြတ်ဆက်ဆိုလျှင်ကားဝယ်ပြီးတာနဲ့ ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်ကညန သိမ်းပါလိမ့်မည်။
၆။ ကားဘီးသဲကာများသည်လည်းနဂိုသဲကာအတိုင်းသာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးညစ်ပတ်နေပေမယ့် သပ်သပ် ရပ်ရပ်ရှိနေရပါမည်။
၇။ အရေးကြီးဆုံးက ကား ရဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့အင်ဂျင်ခန်း ကဖရိန်တွေသည်သန့်ရှင်းနေရပါမည်။အများစု သည်ပုံမှန်အရောင်ပုံမှန်ကာလာဖြစ်ရမည်ပြန်မှုတ်ထားပါကသူတစ်နေရာတည်းကွက်ဖြူနေတတ်ပါသည်။ ကွက်နေတိုင်းလည်းယူလို့ရတာတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်ကားကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဈေး မကောင်းရင် လည်းမကောင်းနဲ့ဈေးဘဲ ပေးနိုင်ဖို့ စစ်ခိုင်းတာပါ
၈။လူတွေသတိမထားဘဲ ကျော်ကျော်သွားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ကားခြေနင်းပြားအောက်ကိုလှန်ကြည့်ဖို့နောက်ဖုံးအခင်းပြားအောက်ခွာကြည့်ဖို့ လုံးဝအားမနာပါနဲ့အားနာ လို့ သံချေး လိုက်နေရင်ကိုယ့်လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ပြီသာ မှတ်လိုက်ပါတော့သံချေး ရှိတဲ့ကားအလွန်ဆုံး ၁ နှစ်လောက်ဘဲ ကောင်းမှာပါ
၉။ ကီလိုမှန်မမှန်စစ်နိုင်ဖို့ကတော့ အကြမ်းအားဖြင့် မှတ်သားရမှာကတော့ ကား ကီလိုတွေရဲ့အသက်က ဖင်ထိုင်ခုံနဲ့စီယာရင်ထိုင်ခုံခါးပါတ်လို့ အကြမ်းဖြင်းမှတ်ပါ။ကီလိုများရင် အားလုံးနွမ်းတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် တချို့ ဂျပန်ကား တွေ ကလည်းဂျပန်ကနောက်ဆုံးပိုင်ရှင်အကိုင်အတွယ်ကြမ်းတမ်းရင် ကီလို သုံးသောင်း နဲ့လည်းစုတ်ပြတ်သတ်နေတာကို မြင်ဖူးပါတယ်
၁၀။တချို့ကလည်းတိုက်ကားဘယ်လိုခွဲမလဲ မေးကြပါလိမ့်မယ်ဂျပန်မှာတိုက်ကားအားလုံးကို Recondition လုပ်ပြီးရင် ဒီအတိုင်း စစ်လို့ မရတော့ပါ ဘာလို့ဆိုတော့ တိုက်မိသမျှ ပျက်စီးသမျှ အကုန်အသစ်လဲလိုက်သောကြောင့်ပါ ဒါကြောင့် ကန်ဆယ်လေးရှင်းအမှန်ဆိုရင် ကားဝယ်ယူသူတွေက တန်ဖိုးထားကြရတာပါ။
၁၁။ဘာကြောင့် ကန်ဆယ်လေးရှင်းအမှန်တွေ ရောင်းကားထဲမှာမရှိတာလဲအများစုမေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရှိမလဲဗျာကားတစ်စီးကိုဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ပြီးဝယ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာကန်ဆယ်လေးရှင်းအမှန်ဈေးနဲ့ အစုတ်အပြတ်ဈေးဂျပန်မှာတချို့ဆို သိန်း လေးငါးဆယ်ကွာနေတာမို့ဘယ်သူမှ ကားကောင်းကိုသွင်းမရောင်း နိုင်တော့တာပါ …ဒါကြောင့် ကားကောင်းဆို စီးမယ့်ဆိုပြီးသွင်းတဲ့ လူတွေ ပြန်ရောင်းမှသာရှိတော့တာပါ တကယ်စီးမယ့်သူတွေသူတို့ကားကီလိုများရင်တောင် မကြိုက်ကြပါဘူးကျန်တာဆို စဉ်းစားမနေပါနဲ့…
၁၂။ကားအရောင် တန်းမှာ မြန်မာပြည်အကြိုက်က အပေါ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဈေးကအဖြူ အမည်းပါ ပြီးရင် ကြားအရောင်လို့ခေါ်တဲ့ မိုးပြာတို့ ရွှေအိုတို့ လာပါတယ်ပြီးရင်အရောင်ပျက်လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တိုင်ရောင်တို့ အပြာတောက်တောက်အနီတောက်တောက်အရောင်တွေကိုတော့သခင်ချစ်ကား ချစ်လွန်းလို့ကိုယ့်နားက တော်တော်နဲ့မသွားဘူး လို့ မှတ်သားထားပါ
အရောင်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ကားတိုင်းအတွက် တော့မတူနိုင်ပေမယ့် အကြမ်းဖျင်းကတော့အရောင်တွေကိုလိုက်ပြီး ဈေးနှုန်းက ၁၀ သိန်းလောက်ကနေပိုကွာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဓါတ်တိုင် Silver အရောင်ပျက် ဆိုပြီး 99 Surfတို့ 99 Prado တို့ကိုတော့ သွားမလုပ်နဲ့နော်သူတို့ပုံစံ နဲ့ ငွေရောင်ဆို ကောင်းတာမို့ အဲ့လိုကားတွေမှာတော့အရောင်ပျက်လို့ မခေါ်နိုင်ပြန်ပါဘူး
၁၃။ ကား ဝယ်ယူမည့်လူတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ တွန်းရောင်းတတ်တာလေးတစ်ခုကတော့2WD /4WD ကိစ္စပါ လိုအပ်တဲ့လူအတွက် လေးဘီးယက်ဆိုတာ လိုပေမယ့်လူ များစု နဲ့ ဆီစားနှုန်းသက်သာဖို့ အတွက်ကတော့လေးဘီးယက်တွေဟာ ဖြုတ်မရဘဲ ၂၀ ကီလို နင်းမှ ပြုတ်တဲ့ဟာ ဆိုရင်တော့ဆီစားမယ် ၊ ပြန်ရောင်းရင် ခက်မယ်ဆိုတာကိုပါ လုံးဝတွက်ထားပါ
ကြမ်းတမ်းတဲ့တောင်တန်း မြေသားလမ်းတွေအတွက် ( ကတ္တရာလမ်းမပါ )လေးဘီးယက်ကားအသုံးဝင်ပေမယ့်မြေပြန်လမ်းတွေအတွက်ကတော့မလိုအပ်တာမို့ ဒီတစ်ချက်ကိုလည်း ချင့်ချိန်ပါ 2WD /4WD နှစ်မျိုးရွှေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံမှန် အိမ်စီး ကားအများစုမှာ 4WD ကားတွေက လေလံ မှာကိုဘဲ သိန်း 20 ကနေ သိန်း 40 လောက်ထိ သက်သာ နေတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်.
၁၄။ ကားကိုစစ်ရင် နောက်ခန်းလည်းကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ် နောက်ခန်းကိုလည်းသေချာစစ်ပါ ကား မှာပါတာ Orginal ဟုတ်မဟုတ်သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ အသုံးပြုထားသေးလား ဘီး ဂျိုက် ဂွ တွေ ပါတာတွေပေါ့ဗျာ … အများအားဖြင့်တော့ဂျပန်ကလာရင် အသုံးမပြုရသေးတာ များပါတယ်
၁၅။ ကား ကိုလည်း စစ်ပြီးပြီစိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင်တော့မောင်းသာ စမ်းပေတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ အားမနာပါနဲ့ပိုက်ဆံ ရိုက်ထုတ်တဲ့ စက်လည်း မိတ်ဆွေတို့ ဆီမှာ မရှိ
ကဲ..ကားဝယ်တော့မယ့် စာဖတ်သူများအတွက် အသိတစ်ခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကားများဝယ်ယူနိုင်ကြပါစေနော်။ သူငယ်ချင်းတွေသိအောင်လည်းမျှဝေပေးခဲ့လိုက်ပါနော်
Credit: car journal
၁။ ကား ကိုကွညျ့မယျဆိုရငျအလငျးရောငျ ကောငျးကောငျး ရရှိပွီးအရိပျအောကျသကျတောငျ့သကျသာ ကွညျ့နိုငျသောနရော ဖွဈရမညျဖွဈပွီးနလေ့ညျ့ခငျး နပေူအောကျကွညျ့ရှု့ခွငျးရှောငျပါအပူဒါဏျ ပွငျးထနျလှနျးသဖွငျ့ကားကွညျ့ရှုသောအခါတှငျသကျတောငျ့သကျသာမဖွဈလို့စဈရမှာတှကေနျြခဲ့တတျပါတယျ။
အပူဒါဏျသကျသာအောငျဆိုပွီးညနဘေကျနဲ့မိုးခြူပျပိုငျးတော့ ကား ကွညျ့ဖို့မလုပျကွပါနဲ့နျောသဘောပေါကျပါရထေဲ ပိုကျဆံလှငျ့ပွဈလိုကျရငျတောငျအသံမွညျဦးမှာပါ..
၄။ ကားအစီးတိုငျးမှာ Wheel Tax ပါပါတယျပါတဲ့ Wheel Tax ဖရိနျနံပါတျနဲ့ကားမှာ တကယျပါသောနံပါတျတူညီမှု ရှိမရှိ အရငျစဈပါ၊ကားမှာတပျထားသော ဖရိနျ chassis နရောသညျလညျးသနျ့ရှငျးသပျရပျနရေပါမညျ ဖွတျဆကျဆိုလြှငျကားဝယျပွီးတာနဲ့ ဆုံးသှားပါလိမျ့မညျကညန သိမျးပါလိမျ့မညျ။
၆။ ကားဘီးသဲကာမြားသညျလညျးနဂိုသဲကာအတိုငျးသာဖွဈရမညျဖွဈပွီးညဈပတျနပေမေယျ့ သပျသပျ ရပျရပျရှိနရေပါမညျ။
၁၀။တခြို့ကလညျးတိုကျကားဘယျလိုခှဲမလဲ မေးကွပါလိမျ့မယျဂပြနျမှာတိုကျကားအားလုံးကို Recondition လုပျပွီးရငျ ဒီအတိုငျး စဈလို့ မရတော့ပါ ဘာလို့ဆိုတော့ တိုကျမိသမြှ ပကျြစီးသမြှ အကုနျအသဈလဲလိုကျသောကွောငျ့ပါ ဒါကွောငျ့ ကနျဆယျလေးရှငျးအမှနျဆိုရငျ ကားဝယျယူသူတှကေ တနျဖိုးထားကွရတာပါ။
၁၁။ဘာကွောငျ့ ကနျဆယျလေးရှငျးအမှနျတှေ ရောငျးကားထဲမှာမရှိတာလဲအမြားစုမေးပါလိမျ့မယျဘယျရှိမလဲဗြာကားတဈစီးကိုဈေးနှုနျး နှိုငျးယှဉျပွီးဝယျတဲ့ တိုငျးပွညျမှာကနျဆယျလေးရှငျးအမှနျဈေးနဲ့ အစုတျအပွတျဈေးဂပြနျမှာတခြို့ဆို သိနျး လေးငါးဆယျကှာနတောမို့ဘယျသူမှ ကားကောငျးကိုသှငျးမရောငျး နိုငျတော့တာပါ …ဒါကွောငျ့ ကားကောငျးဆို စီးမယျ့ဆိုပွီးသှငျးတဲ့ လူတှေ ပွနျရောငျးမှသာရှိတော့တာပါ တကယျစီးမယျ့သူတှသေူတို့ကားကီလိုမြားရငျတောငျ မကွိုကျကွပါဘူးကနျြတာဆို စဉျးစားမနပေါနဲ့…
ကွမျးတမျးတဲ့တောငျတနျး မွသေားလမျးတှအေတှကျ ( ကတ်တရာလမျးမပါ )လေးဘီးယကျကားအသုံးဝငျပမေယျ့မွပွေနျလမျးတှအေတှကျကတော့မလိုအပျတာမို့ ဒီတဈခကျြကိုလညျး ခငျြ့ခြိနျပါ 2WD /4WD နှဈမြိုးရှေးခယျြခှငျ့ရှိတဲ့ပုံမှနျ အိမျစီး ကားအမြားစုမှာ 4WD ကားတှကေ လလေံ မှာကိုဘဲ သိနျး 20 ကနေ သိနျး 40 လောကျထိ သကျသာ နတေတျတာကိုတှရေ့ပါတယျ.
၁၄။ ကားကိုစဈရငျ နောကျခနျးလညျးကနျြခဲ့တတျပါတယျ နောကျခနျးကိုလညျးသခြောစဈပါ ကား မှာပါတာ Orginal ဟုတျမဟုတျသနျ့ရှငျးမှု ရှိမရှိ အသုံးပွုထားသေးလား ဘီး ဂြိုကျ ဂှ တှေ ပါတာတှပေေါ့ဗြာ … အမြားအားဖွငျ့တော့ဂပြနျကလာရငျ အသုံးမပွုရသေးတာ မြားပါတယျ
ကဲ..ကားဝယျတော့မယျ့ စာဖတျသူမြားအတှကျ အသိတဈခုရမယျလို့ထငျပါတယျနျော။ဒီစာလေးကိုဖတျပွီးကောငျးမှနျတဲ့ကားမြားဝယျယူနိုငျကွပါစနေျော။သူငယျခငျြးတှသေိအောငျလညျးမြှဝပေေးခဲ့လိုကျပါနျော
ကြက်သွန်နီ ရဲ့ ဘက်စုံအသုံးဝင်ပုံ နည်းလမ်း (၇) သွယ်…